ခက်မာ 1. 2.
“When the music is out of time, the rhythm is destroyed. When the timing isn’t right, the flavor of the curry is destroyed. In politics, when the timing is wrong, the image of the whole country is destroyed. The timing in politics is to do the right thing at the right time.”
My friend Win Maw,amusician and video journalist, said this to his daughter Khin Suu Kyi. On January 5th she quoted him in an open letter to Thein Sein, the president of Burma, asking for his release from prison.
In 1981 Win Maw entered the music industry as the lead guitar player and band leader of Shwe Thansin (Golden Melody). When Golden Melody was banned from the airwaves he became the leader of the band A-Lin-Kar. On November 18, 1996, duringatouristic campaign that the government called “Visit Myanmar Year,” Win Maw was arrested by the military government. He was sentenced to six years in prison for writing songs in support of Burma’s pro-democracy leader Aung San Suu Kyi.
Labels: English0comments | |
“ဂီတမှာ Timing ဟာအသက်ပဲ၊ အရေးကြီးဆုံးပဲ။ Timing လွဲသွားရင် တေးသွား သီချင်းရဲ့အရသာပျက်သွားရော။ ထို့အတူဘဲ ဟင်းချက်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားကစား လုပ်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Timing မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဟင်းတစ်ခွက် Timing Out သွားရင် သီချင်း လောက် ဟင်းလောက်ပဲအရသာပျက်မှာ၊ နိုင်ငံရေး မှာ Timing လွဲသွားရင် တိုင်းပြည်တခုလုံးရဲ့ Image ပျက်တယ်။ တစ်မျိုးသားလုံးထိခိုက် နစ်နာစေတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ Timing ဆိုတာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်သင့်တဲ့ အချိန်မှာ လုပ်ခြင်းပါပဲ။” ဒီစကားကိုပြောခဲ့သူက ကျမသူငယ်ချင်း ဂီတသမား၊ ဗီဒီယို ဂျာနယ်လစ်စ် ကိုဝင်းမော် ပါ။
ဒီစကားကို သူက သူ့သမီးကိုပြောခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့သားသမီး ၄ ယောက်ထဲက တတိယ သမီး ခင်စုကြည် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာရေးခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးသို့အိတ်ဖွင့်ပေး စာမှာ သူမဖခင်ရဲ့အဲဒီပြောစကားကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားကပဲကိုဝင်းမော်ရဲ့ နိုင်ငံ နဲ့ ဂီတအပေါ်ထားရှိတဲ့ လေးနက်မှုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုဝင်းမော်ဟာ ဂစ်တာသမား အဖြစ်နဲ့ ၁၉၈၁ ကတည်းက ဂီတနယ်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့သူပါ။ ရွှေသံစဉ်နဲ့ အလင်္ကာတေးဂီတအဖွဲ့တွေမှာ Lead Guitar တီးခတ်တဲ့ ဂီတ မှူး၊ တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ် ။ The Aces တေးဂီတအဖွဲ့ကြီးမှာ လည်း ၁၉၈၉ ကနေ ၁၉၉၆ ထိ ၇ နှစ်တိတိ Lead Guitar တီးခတ်ခဲ့ပါ တယ်။
Labels: Article 1 comments | |
Labels: Poem4comments | |
The most cheerful tiding hit me
In the most cheerless hour of life.
I should have been there on the shoulder of the road.
I should have been waving them my welcome.
They haven’t heeded the void of my existence.
With the zeal ofapossessed clairvoyant,
A lane into the future has been rebuilt.
Their strength glitters into gold.
They harden into diamonds,
As my chaotic heart is being clamped.
Now I will douse my clay laughter in my tears.
I will turn it into fragile earthenware.
I will color it with hope. What else could I do?
What they do every day,
I don’t do it once inalifetime.
I call it ‘the gap…’ between us.
So, they are the saints, who have
Walked through multilayered walls.
I am the sinner imprisoned in the outer space,
Burning in my own ignoramus fire.
Here is my tour de force;
The anxious wait I’ve been waiting
After I dialed that number,
The sum of the math figures I despise.
From the other side of the universe
Like lint that floats in the air
A charm flows into the tiny steel wire
The knife that has cutachunk out of my chest commands,
‘Come back home.’
Blood oozes out of my wound.
I sponge it up.
I don’t want to be left bleeding to die.
Whatever form I may take
I need to keep my blood flowing
So I can keep making attempts…
Everyone heads for the last line
Before I get there,
I wish I could dash into the home one more time
To fill their lane with my little pebbles.
To plant cobra’s saffrons in my earthenware.
Labels: English2comments | |
၁၉၉၅ ခုနှစ်တုန်းက ဆရာမင်းသုဝဏ်ခြံထဲကထမနဲပွဲမှာ ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာမောင်စွမ်းရည်၊ ဘဘဦးမိုးသူ၊ ဦးလှိုင်(သုခမိန်လှိုင်) ဆရာဒဂုန်တာရာ့မြေးဒေ၀ီကလေးနဲ့ကျမ အမှတ်တရ
စက်တင်ဘာလထဲမှာ မာမားဆီကအီးမေးလ်တစ်စောင်ရပါတယ်။ ‘သားငယ်နဲ့ဖုန်းပြောရတယ်။ ဦးရဲ့ အဆူမခံရတာကြာပြီ။ အဆူခံချင်သေးတယ်လို့ သားငယ်ကို ခက်မာကပြောတယ်လို့ပြန်ပြောပြတယ်။ ဦးကလည်းပြောတယ်။ 'သူ့ကို ငါကစိတ်ပူလို့ဆူနေရတာတဲ့’။ အဲဒီမေးလ်လေးကိုဖတ်ပြီးကျမမျက်ရည် လည်ခဲ့ရပါ တယ်။ အီးမေးလ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးစာပြန်ဖို့လုပ်ရင်း ဘယ်လိုပြန်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရာကနေ အတွေးတွေကအတိတ်ကိုရောက်သွားတော့ ညလည်ခေါင်ကြီးမှာ တယောက်ထဲ ရယ်လိုက်၊ မျက်ရည်ကျလိုက်နဲ့တမ်းတရင်းရှင်သန်ရတဲ့ လူလတ်ပိုင်း ကာလရဲ့ အရသာကို အပြည့်အ၀ ခံစားလိုက်တာစာတောင်မပြန်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့နောက်နေ့မှအေးအေးဆေးဆေးဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နဲ့ စာရှည်ရှည်ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုပြီးတေးထားလိုက်ပါတယ်။
Labels: Essay4comments | |
Burmese Musician Win Maw: The Creator of Golden Me...